The 25 imidlalo best of 2015: 20-16 - Izindaba Rule
The 25 imidlalo best of 2015: 20-16
Lesi sihloko osesikhundleni “The 25 imidlalo best of 2015: 20-16” lalotshwa Keith Stuart, Simon Parkin futhi Ian Ford, ngoba theguardian.com ngoLwesibili 15th December 2015 09.35 UTC
The 25 imidlalo best of 2015, 25-21
Kuyingxenye amabili romp yethu ngokusebenzisa best games of 2015, futhi ngemva okuhlushwa wayizolo offbeat hits indie, lapha kukhona … kahle, Ithi ukuncipha kancane futhi. Sasingalindeli ngikuxwayise lokhu kwaba uhlu subjective kakhulu.
20. With Galak (PC / PS4)
Ungakwazi yini ukubhekana nenhlekelele? Galak Z uzokutshela noma kunjalo.
I yobuhle kubolekwe 1980 ngoMgqibelo ekuseni amakhathuni, uhlobo lapho a boyish Japanese iqhawe isikhala pilot uthatha phansi hulking silo alien ngenkathi sizongena ngempumelelo emkhakheni asteroyidi. Nokho, ngemuva the bluster, lena umdlalo ngokufunda indlela yokubhekana nenhlekelele uma, ngokwesibonelo, ubhekene ekuthuthumeleni kwezinye eshiyiwe isikhala emhumeni, izihlangu mpilo, ngizibuza ukuthi emhlabeni ungenza ekhaya mothership yinye. Kwadalwa Jake Kazdal, ngubani Lasebenzisana Tetsuya Mizuguchi on the Bhalobhasha kwesidoda Rez, kungcono umdlalo Muhle kakhulu. Kodwa ubuhle bangempela itholakala izinhlekelele kuwo ubhekene thrusted ngisho noma, ngoba abanye abadlali, izimfuno zabo kuyoba kancane esemkhathini kakhulu.
Arcade isigqi ... N ++.
The isigqi Arcade N ++ cishe ngokomzwelo wemvelo ajwayelekile. Lona umdlalo lapho wena ukuphinda izenzo ezifanayo, njalo nje, ekufuneni ukuba balukhulume nokucabangisisa ngekwendzawo. uhlamvu lwakho, ninja amancane, oziphilela nje 90 imizuzwana. Kuleso sikhathi, kumelwe azame ukuba unqamule amagumbi amahlanu ezibulalayo. Akukona inoveli noma ezithinta kwesisekelo kakhulu, nokho, N ++ uzizwa asanda ezibalulekile (kanye okukhulu: kukhona ezungeze amakamelo ayizinkulungwane ezimbili inselele kute sibukane). Njengazo zonke kunakho Twitch zabuna, uhambo olusuka saqala inkosi akabatshelanga nge amakhono amasha for avatar yakho, kodwa kunalokho ezandleni zakho futhi inkumbulo muscle. Wena shiya uchwepheshe - siqala one in a isici uselessly ethile.
18. Tales from Borderlands (takhiwo amaningi)
Tragedy isisu UYAHLEKA: Tales from the Borderlands.
Like Tales Traveller ngayo Lego iziqu ezithi, Mbala inikeza factory production line mbaxa yimuphi umdlalo, ibhayisikobho noma uhlelo lwe ithelevishini franchise futhi turning kube into smart, bezijabulisa futhi ngokuvamile hilarious. Nakuba Game of Thrones futhi Minecraft: Indaba Mode futhi ezikhazimula kulo nyaka, kungcono le spin off kusukela Gearbox RPG abacibishelayo ukuthi sasikujabulela ngempela, sibonga izinhlamvu zalo ezinhle, funny ngobuqotho script nochwepheshe kuvisisa yonke lelandzisako lapho usizi isisu UYAHLEKA kukhona owake kuphela blast laser ahluke.
Isihloko pun njengabawufanelekele elicwengekileyo stealth game kulo nyaka, Invisible Inc. futhi inama ubuhle mkhulu nangomuzwa wokuphuthuma kunanoma iyiphi-based kuyithuba isu isihloko unalo ilungelo lokuthatha. Unayo 72 amahora ukusindisa yezezinhloli yakho ngokufaka abangena megacorps 2074 sika, ukudonsa ngamandla futhi nezimali Ngokuthembela enhlanhleni ngokuqinile embondelene ngokumelene nawe, ngisho ne esibalulekile hlehlisa umsebenzi. nokwanda kwalo yamuva kabili ubude umkhankaso kuwufanele kakade futhi ephinde ewavakashela ngenxa ngokwezifiso uhlamvu Ukukhetha elikhulu; ungubani ukuletha kanye ngeke zisishintshe ngokuphelele alter playstyle yakho.
Super Mario Maker Photograph: Nintendo
Ngesinye isikhathi noma kwenye, thina usucabangisisile zonke ngasese: 'Hey, ukuthi Shigeru Miyamoto is a Hack ephelele; Ngingenzenjani kangcono. 'Awu manje sinawo ithuba. Super Mario Maker iyithuluzi elinamandla ngobuqili indalo, ngokuvumela nje ngomuntu ukuba basungule amazinga abo siqu platforming futhi sabelane nabo emhlabeni. Nakuba kungcono ejulile futhi eziyinkimbinkimbi, Nintendo uyazi ukudizayina interface osebenzayo, okwenza kanjalo Izinto kuyajabulisa okuningi njengoba sidlala. Kunjalo, sonke Ngokushesha uyaqaphela ukuthi Miyamoto eqinisweni genius, kodwa mhlawumbe lokho iphuzu.
The Guardian Imidlalo 'Review of the Year' kuyenzeka ngesikhathi Guardian sika Scott Room ngoLwesine kusihlwa, 7-8.30pm. Featuring Keith Stuart, abalobi Simon Parkin kanye Cara Ellison game developer Mike Bithell, sizobe sibuke emuva 2015, ne egayiwe ophaya kanye giant (khulula!) Xmas tombola kanye nemiklomelo amazing! Amathikithi ayatholakala lapha.
← The 25 imidlalo best of 2015: 25-21 Star Wars: The Force ongenza Review →